Wednesday April 08, 2015 - 21:05:32 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sh/Cali Maxamuud Raage (Sh/Cali Dheere) oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Gaarisa dhulka Soomaalid
Xilli ay Kenya si weyn u hadal heyso khasaarihii kasoo gaaray weerarka islamarkaana ay sheegtay in looga dilay 147 ruux ayuu afhayeenku sheegay in tirada dhimashadu intaasi ka badan tahay oo ay kor u dhaafeyso 200 isagoo soo bandhigay tusaalooyin arrintaasi muujinaya.
Sheekh Cali dheere ayaa sheegay in ujeedada jaamacadda loo weeraray ay tahayiyadoo wax lagu barayay saraakiishii iyo siyaasiyiintii mustaqbalka dhow ee Kiristanka Kenya oo duullaan cad kusoo qaaday Soomaaliya xilli ay horey u heysteen dhulkii uu gumeystihii Ingiriisku siiyay.
Sidoo kale waxa uu sheegay in mujaahidiintu ku guuleysteen iney kala soocaan muslimiinta iyo gaalada taasoo sharci ah, laakin waxa uu u jawaabay isagoo adillooyin soo qaadanaya dad warbaahinta ka sheegayay in arrintaasi colaad ka dhex abuureyso gaalada iyo muslimiinta.
Sheekh Cali ayaan weydiinay eedeymaha uga imanaya Kenya ee ah in dadka ay dileen mujaahidiintu aad u badan yihiin oo xasuuq lagu tilmaami karo, wuxuuna sheegay iney intaasi ku yaar tahay oo ayba jeclaayeen inaaney waxba ka badbaadin dhammaan kuwii gaalada ahaa ee Jaamacadda dhiganayay.
Digniin lahjaddeeu kulushahay iyo dardaaran tiraabtiisu dabacsan tahay ayuu wareysiga kusoo gabagabeeyay. Waxa uu digniinta u jeediyay Kenya oo duullaan kusoo qaaday dalka Soomaaliya gumaadna ku heysa muslimiinta, halka uu dardaaranka u jeediyay ummada muslimka ah ee ku dhaqan Kenya iyo Soomaaliya intaba.